Home Wararka Cutubyo ka tirsan ciidanka Itoobiya oo lagu wado in ay dhawaan gaaraan...
Cutubyo ka tirsan ciidanka Itoobiya oo lagu wado in ay dhawaan gaaraan deegaanka Hirshabelle (Jowhar)
AMISOM ayaa waxa ay ku mashquulsan tahay in ay hesho ciidankii AMSIOM ee badali lahaa ciidamada Burundi ee dhawaan la filayo in ay isaga soo baxaan degaanka Hirshabeelle gaar ahaan degaanka Shabeellada Dhexe.
AMISOM ayaa waxa dhib ka haysataa meesha laga soo qaadi lahaa ciidanka lagu badalayo Brundi. MW Waare oo dhawaan la kulmay madaxada AMISOM ayaa ku ooyay madaxda AMISOM isaga oo ka codsaday in ciidanka badali lahaa Brundiga si dhaqsi lagu keeno degaanka Jowhar madaama uu ka baqayo in Gobolka Shabeelada Dhexe gaar ahaan magaalada Jowhar ay la wareegaan ciidanka AL Shabaab.
Hadaba war ay soo saartay xarunta talista dhexe ee ciidamada Itoobiya ayaa waxa lagu sheegay in uu socdo abaabulka cutubyadii la geyn lahaa degaanka Shabeellada Dhexe.
Dowlada Soomaaliya ayaa waxa ay la gashay heshiis dowlada Itoobiya kaas oo awood u siinayo ciidanka Itoobiya in ay soo galaan Soomaaliya xili kastaa oo ay doonaan iyaga oo ka madax baanan hogaanka AMISOM.
Imaatinka Ciidanka Itooobiya ayaa waxa uu hor dhac u yahay ciidan la geeyn doono magalada Muqadishu iyo nawaaxigeeda kuwaan oo saamayn ku yaalan doono amaanka iyo siyaasada magaalada Muqadishu. Talabadaan ayaa waxa ay qayb ka tahay qorshaha uu damacsan yahay Madaxweyne Farmaajo op ah in dalka ay u qabtaan ciidamo itoobiyaan ah iyo kuwo Eritereeyaan ah, gaar ahaa degeenada Hirshabeele, Galmudug iyo Muqadishu.